Khuphela ividiyo yeArab ➵ Khuphela iividiyo ezi-4k, iividiyo ezili-1080p, iividiyo zeHD, imibhalo engezantsi, iifoto, iiposta, ifilim, ifilimu, umaki
Usebenzisa uhlobo oludala. Cofa apha ukufaka inguqulelo yamva nje 1.0.5
Khuphela ividiyo yeArab
❝Khuphela iividiyo ezivela kwiHarry kumgangatho ophezulu❞
➶ Khuphela iividiyo ezi-4k, iividiyo ezili-1080p, iividiyo zeHD, imibhalo engezantsi, iifoto, iiposta, ifilim, ifilimu, umaki
Khuphela i-URL yevidiyo kwaye uyincamathisele kwiibhokisi ezingasentla, emva koko umnikhuphele iArab unokufumana ividiyo ngokukhawuleza. Cofa ngasekunene kwikhonkco lokukhuphela kwaye ugcine iividiyo ze-Dailymotion kwiidiski zalapha.
Akukho fayile zokukhuphela zifunyenweyo. Faka isongezelelo sebrawuza uze uzame kwakhona.
Umdlalo olula weHall Dailymotion
Olu lwandiso lukuvumela ukuba ukhuphele iividiyo kunye nethayile evela kwiHarad. Khuphela iividiyo ezi-4K ezivela kwiHarad. ➥ Faka ngoku
Faka uMncedisi wokukhuphela iMidiya
Inkxaso kwiiwebhusayithi ezininzi. ➥ Faka ngoku
UkuKhangela okuNgeziwe ➹
Ungazikhuphela njani iVidiyo eziValiweyo ngokuthe ngqo?
Cofa ekunene kwividiyo
Ikopi kwifowuni kunye nekhowudi yeQR
Indlela yokukhuphela iividiyo ze-Dailymotion
Sinokubukela iiMovie zeHDH movie xa unesantya esiphezulu kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubukele ividiyo ye-HD. Okukhuphela umboniso wevidiyo weHarad HD unokukunceda ugcine iividiyo zeHD njenge-MP4 HD Umgangatho ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho.
Vula le webhusayithi
Ngenisa i-URL yevidiyo yeArab kwaye ucofe iqhosha Lokukhuphela.
Uya kubona uluhlu lwazo zonke izixhumanisi ezikhoyo.
Khetha ifomathi kunye nomgangatho kwaye ukonwabele iividiyo ngaphandle!
Ukhuphelo lwasimahla lwevidiyo ezivela kwiHaradand kunye nokongezwa kweChannel kunye neFirefox
Vula indawo yeWebhusayithi yeArab.
Dlala ividiyo kwiHarry.
Vula olu lwandiso. ➥ Faka ngoku
Ndilinde imizuzwana embalwa.
Cofa kumgangatho ofuna ukuwukhuphela.
Kwithebhu entsha, ifayile iya kukhuphela ngokuzenzekelayo uze ugcine kwifowuni yakho.
NjengeYouTube, iKhabani yindawo esetyenziswa ngokubanzi yokwabelana ngevidiyo kunye nezigidi zabasebenzisi bemihla ngemihla. I-Dailymotion ivumela abasebenzisi ukuba bakhangele kwaye balayishe iividiyo ngokukhangela iitgi, iziteshi, okanye amaqela adalwe ngumsebenzisi. Ungabukela iividiyo mahala simahla kubandakanya umculo, iikhathuni, iimuvi ...
Ukuze kube lula, Beka i-bookmark kuthi!
Chukumisa i icon ⁝ okanye …
Chukumisa i icon ☆ okanye ♡
Cinezela Shift+Ctrl+D. Ukuba usebenzisa iMac OS X, Cinezela Shift+⌘+D
⤓ Khuphela fbion.com ← Tsala oku kwibha yeebhukumaki zakho
Ngaba awuboni ibhukumaki yebhukumaka? Cinezela Shift+Ctrl+B
Ukuba usebenzisa iMac OS X, Cinezela Shift+⌘+B
Okanye, kopisha yonke ikhowudi engezantsi kwebhokisi yesicatshulwa uze uyincamathisele kwibharmaki yakho.
Jonga umfanekiso ongezantsi
Ukukhuphela ividiyo yeHarry
Ngoku, kulula kakhulu ukukhuphela iividiyo zeSimahla zeHarad ngaphandle kwayo nayiphi na ingxaki.
Khuphela iividiyo ezininzi zemihla ngemihla
Khuphela iividiyo zeIhabtar kwi-batch ngaxeshanye. Khuphela ividiyo yokudlala yeArab yevidiyo okanye isitishi ngokuchofoza nje okukodwa.
Umdlalo wekhomputha kwiHallpaper
Khuphela kwi-intanethi ubungakanani be-1080p epheleleyo.
Ixhasa iFomathi eNinzi yeVidiyo
Ukukhuphela ividiyo yokukhuphela umdibaniso weVidiyo kuvelisa iifomathi ezahlukeneyo zevidiyo: 4K 2160p, Ultra HD 1440p, HD HD80 epheleleyo, 854p, HD 720p, 640p, 480p, 380p, 256p, 240p, 144p resolution, 256Kbps mp3.
Fumanisa iividiyo zakho ozithandayo
Chwetheza amagama aphambili kwi-bar yokukhangela, ividiyo ehambelana ne-Dailymotion iya kubonakala. Gcina iividiyo zakho ozithandayo zeArabhu zokusebenzisa ngaphandle kweintanethi ngezixhobo ezilula.
Simahla Akukho ntlawulo kwaye zikhuselekile ukuba zisebenzise
Unokuzikhuphela iividiyo ezininzi njengoko ufuna mahala. I-100% icocekile kwaye ikhuselekile ukusebenzisa ngaphandle kweefom zentsholongwane ukungena kwidesktop okanye kwithebhulethi yakho xa ukhuphela amakhonkco evidiyo.
Sebenza kakuhle kuso nasiphi na isikhangeli
I-Dailymotion downloader isebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser kunye nakweyiphi na ibrowser. Ukongeza, iyahambelana kakhulu nenkqubo yokusebenza kweMac.
Ilula kwaye iyakhawuleza
Yonwabele isantya sokukhuphela ngokukhawuleza nangokulula ngaphandle kokulahleka komgangatho. Sizame konke okusemandleni ethu ukwenza le Bhawutari yokukhuphela ngokulula ngokulula.
Awudingi ukubhalisa okanye ukubonelela ngolwazi.
Khuphela iividiyo ngokukhawuleza ngamanyathelo alula kwaye alula ngaphandle kobhaliso okanye uvula iakhawunti kumkhuphe ividiyo yevidiyo kwaye ugcine iividiyo ngokubukela kamva okanye ngezinye iinjongo.
Imibuzo ebuzwa qho ✉
Fumana imibuzo kunye neempendulo zakho Apha - uyigcina njani ividiyo ye-Dailymotion?
+ Ngaba ndingazikopa iividiyo zam kwiArmad?
Kuyenzeka ukuba ukhuphele ividiyo yakho kwiArmash. Vula i-Dailymotion kwaye ulayishe ividiyo yakho kwaye kwimizuzu embalwa iya kuvelisa i-URL yeVidiyo yakho, ukope i-URL kwaye uvule ividiyo yokukhuphela ividiyo ye-Dailymotion kwaye unamathisele i-URL kwibhokisi yesicatshulwa uze ucofe iqhosha lokukhuphela.
+ Ndinokuzikhuphelela njani iividiyo kwi-app yaseHarsh?
Njengoko iwebhusayithi yethu isebenziseka ngokwenene kwifowuni yakho ephathekayo, ungenza ngenkqubo yokukhuphela ividiyo kunye ne-Smartphone yakho.
Unokuzikhuphela iividiyo ze-Dailymotion kunye nesicelo esiselwayo. Zulazula kwividiyo ye-Dailymotion, Cofa u-Dlala, cofa u-Khetha. Emva koko Khuphela i-URL yevidiyo ye-Dailymotion kwaye unamathisele kwibhokisi yokufaka engasentla kwaye ucofe ukhuphelo.
Unokuzikhuphela njani iividiyo ze-Dailymotion kwiselula?
Unokuzikhuphela njani iividiyo ezivela kuIran kwi-Intanethi?
+ Unokuzikhuphela njani iividiyo zeKharad kwikhompyuter yam ye-MAC?
Khuphela ikhonkco levidiyo ukusuka phezulu kwisiphequluli sakho sewebhu, emva koko unamathisele kule bhokisi yegalelo ingasentla. Cofa uKhuphelo. Ividiyo okanye ifayile yeaudiyo iya kukukhuphela ngokukhawuleza kwi-MC Pc yakho.
+ Ngaba kunokwenzeka ukuba uguqule i-Dailymotion kwi-Mp3 audi?
Impendulo nguEwe. Inkqubo yethu iya kukhuphela ngokuzenzekelayo ividiyo kwaye iyiguqulele kwifayile yeaudio mp3.
+ Indlela yokukhuphela iividiyo ezivela kwiHarry kwi-smartphone ye-Android?
Kuqala faka isiphequluli seFirefox, emva koko ucofe kwikhonkco elilandelayo ukufaka ulwandiso olubizwa ngokuba yiDawari yeeVidiyo zoKhuseleko.
Sebenzisa i-app yeHarad kwisixhobo sakho, ucofe ukudlala ividiyo onqwenela ukuyikhuphela. Thepha kwi icon yokwabelana ngasezantsi kwesibonisi. Khetha ikopi kwibhodi eqhotyoshwayo.
Vula ithebhu entsha kwiFirefox browser. Fikelela kwiWebhusayithi ye-Dailymotion ukusuka kwibhodi yokunamathisela ngokuncamathisela i-url kwibha yedilesi.
Cofa nje kumachaphaza amathathu, emva koko ucofe uKhuphelo kwiiVidiyo zeHarad kwimenyu. Khetha umgangatho kunye nefomathi ekukhetheni ukhuphelo.
+ Ndizibukela njani iividiyo ze-Dailymotion ngaphandle kwe-ios kwizixhobo (iphone, ipad)?
Kwiziko loncedo leAradham ikubonisa indlela yokubukela iividiyo ngaphandle kweintanethi, cofa nje kumachaphaza amathathu ukuvula imenyu yevidiyo kwaye ucofe ku-Jonga ngaphandle kwe-intanethi. Nangona kunjalo, ezi vidiyo zinokugcinwa kuphela iintsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba zisuswe. Eli nqaku lisebenza kuphela kwizixhobo ze-IOS (ifuna ubuncinci be-9 ye-9) kunye nezicelo zemveli ze-Android. Ke ngalo mzuzu, abantu banokucinga ukuba ikhona indlela evumela ukuba sikhuphele iividiyo ze-Dailymotion kwizixhobo zethu zeselula ukuba sibukele ixesha elide?
+ Unokukhuphela njani ividiyo yokudlala ye-Dailymotion?
Kuya kufuneka ufake ibrowser eyandisiweyo ukwenza ukhuphelo lweebhendi zeevidiyo kuludwe lwadlalwayo lweHarsh okanye amajelo.
+ Ndikukhuphela njani iividiyo ezithintelwe okanye zabucala kwiArabhu zikaHarsh online?
Ukuba ufumene iividiyo ezinomdla kwiHarad, kwaye ufuna ukuzikhuphela okanye uziguqulele izixhobo zakho ngqo, kodwa ividiyo iyanqandwa okanye iVidiyo yabucala. Kuya kufuneka ungene ngemvume kwiArabitha kwaye emva koko uvule i-Chrome okanye iFirefox eyongezelelweyo esibonelelwa ngathi ukufumana ikhonkco lokukhuphela ividiyo.
+ Zingaphi iividiyo endinokuzikopa ngemini nganye e-Iraqi?
Injongo yethu ephambili kukwakha iwebhusayithi ukubonelela bonke abasebenzisi ngeqonga lokukhuphela ividiyo yakho oyithandayo kwi-Intanethi mahala. Unokuzikhuphelela naliphi na inani leevidiyo ezivela kwiHarad okanye kwenye iwebhusayithi yokwabelana ngevidiyo ngaphandle kokukhathazeka malunga nomda. Isimahla kwaye ayinayo nayiphi na iMigaqo efihliweyo kunye neMeko ekhutshelweni.
Ukukhuphela ividiyo yeArab yeFayile-yeyona Ndlela yokuBukela iiVidiyo ku-intanethi
5 I-Rated abasebenzisi
Ukuba unethemba lokonwabela iividiyo nangona ungaxhunyiwe kwi-Intanethi, ke le vidiyo yokukhuphela ividiyo ekwi-intanethi yasimahla kwi-Intanethi yindlela efanelekileyo. Ngenxa yenkqubo yayo yokukhuphela ngokukhawuleza uya kukwazi ukukhuphela kunye nokubukela iividiyo zamva nje ngokulula kwakho.
Ukukhuphela iividiyo akukaze kube lula njengoko ngaphandle kokubhalisa naphi na apho unokufumana ividiyo yeArab. Ndiyamangaliswa kuba ividiyo endiyithandayo ikhutshelwa kwinxalenye nje yemizuzu.
Umdibaniso weVidiyo yokuHanjiswa kweVidiyo kaDisemba ulula kwaye unomdla. Ndincoma kakhulu esi sixhobo kubo bonke abathandi bevidiyo beHarad.
Ukukhuphela iVidiyo yeKhabari kuyinto efanelekileyo yokukhuphela kunye nokucaca okucocekileyo, okubonakalayo okubonakalayo komoya kunye nokudityaniswa kwesiphequluli okufanelekileyo. Ndiyincoma ngentliziyo iphela.
Inye yeyona vidiyo ikhuphelwayo ndakha ndayisebenzisa. Kuyinto elula kakhulu kwaye ilula usetyenziso onokuyisebenzisa ukukhuphela iividiyo ezahlukeneyo.
Ndisebenzise olu lwandiswa ukukhuphela iividiyo ezi-4k ukuze ndizibukele kumabonwakude wam. Isebenza kakuhle.
Le yenye yeefayile eziPhambili zeIvidiyo ekwi-Intanethi ukuze ukhuphele iividiyo zeHarad kwiPC yakho okanye kwiSelula.
➥ Thumela izimvo
Ukuphinda phinda phinda uyisebenzise kwi-YouTube
Yabelana nabahlobo bakho
Enkosi ngokusebenzisa inkonzo yethu!
Ukukhuphela iividiyo zokukhuphela kwi-intanethi 1080p 2022
Khubaza imo emnyama ye-Chrome
Khuphela iividiyo zabucala ze-Facebook
Guqula imibala kwi-Facebook
Guqula imvelaphi ku-Facebook
IsiKhangeli soKhuseleko lweSayithi
Nje ukuba ubhalise kwincwadana yethu kwaye unokufumana ulwazi lwalo lonke uhlaziyo kunye neempawu zale webhusayithi.
Ikhowudi ye-QR findmyfbid savefrom odownloader bitdownloader keepvid
Malunga TOS umthetho wabucala Qhagamshelana nathi Sitemap
➴ Fumana Facebook ID